Hake stew ne mbatatisi uye leek | Kicheni Mapepa
Maria vazquez | 24/04/2021 10:00 | Hove Mapoka
Ini ndinodisisa masowe, kunyanya masowe anosanganisa matapiri nehove. Ndinovagadzirira chero nguva yegore. mabvazuva hake stew ne mbatatisi uye leek Iyo ndeimwe yeakareruka uye ayo andinowanzo sanganisira mumenu yevhiki. Ini ndinokukoka iwe kuti uzviedze!
Rondedzero yakapusa yezvigadzirwa uye gadziriro yakakodzera inoita kuti chikafu ichi chive imwe nzira yakanaka yekushandisa mazuva ese. Kufanana nemabiko ese, zvinoda nguva asi hazvisi zvekumanikidza. Kugadzirira yakanaka inomhanyisa-fry ndiyo base zveichi chikafu uye isu hatifanire kumhanyisa kuita kudaro. Mushure meizvozvo, rako basa rave kutopera.
Ndakagadzira chikafu ichi neake, kunyanya ne chando hake chiuno. Iwe unogona, zveshuwa, shandisa nyowani hake kana kuitsiva imwe yeimwe hove. Nekodhi inoshanda chaizvo uye kunyangwe nesarimoni. Kunyangwe yaunosarudza, unofanirwa kuzviyedza!
Iyi hake, mbatatisi uye leek stew yakakosha kuti upedze yako yevhiki menyu. Yakareruka kugadzirira, inonaka uye yakakwana dhishi.
2 epakati anyanisi, akachekwa
½ tsvuku bhero mhiripiri, akachekwa
4 maekisi, minced
6 hake fillets, cheka kuita zvidimbu
3 mbatatisi, cheka kuita zvidimbu
⅔ teaspoon yetaprika inotapira
Hove muto (kana mvura)
Tinopisa mafuta omuorivhi mupoto uye poach anyanisi, mhiripiri uye leek kwemaminetsi gumi nemashanu pamusoro pepakati moto. Pasina kumhanyisa, iyo yakawandisa hanyanisi uye leek caramelize, iyo yakanyanya kunaka iyo mbichana ichave nayo.
Nguva mwaka weiyo chiuno uye isu tinova upfu.
Kamwe kana muto wapera, tinobvisa miriwo kune rumwe rutivi rwecasserole uye wedzera hake chiuno. Pheka kwemaminetsi mashoma pamusoro pepakati-kwakanyanya kupisa kusvikira shava yegoridhe pamativi ese maviri.
Pashure tinowedzera mbatatisi, iyo yakakangwa tomato uye paprika, mwaka uye sanganisa zvese.
Isu tinovhara nehove muto, chivhara uye rega ibike kwemaminetsi gumi nemashanu kana makumi matatu kana kusvika mbatatisi iri nyoro pasina kubata iyo casserole.
Ipapo, isu tinozarura, tinofambisa iyo casserole uye isu tinorega chikafu chabika maviri kana matatu mamwe maminetsi pane yepakati-yakakwira tembiricha.
Isu tinoshumira iyo hake, mbatatisi uye leek stew inopisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Hove Mapoka » Hake stew ne mbatatisi uye leek